Isbarbardhiga Qorshayaasha Baahiyaha Gaarka ah (SNPs) | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
“Baahiyaha gaarka ah” waa erey ballaaran oo qeexaya dadka wajahaan caqabado kala duwan. Waxaa laga yaabaa inaad qabto naafonimo. Ama dhibaato caafimaad oo halis ah oo socota. Haysashada dakhli hooseeya ayaa sidoo kale door ka ciyaari karta. Maqaalkan wuxuu sharraxayaa noocyada kala duwan ee qorshayaasha caafimaadka ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Haddii ay adiga, xubin ka mid ah qoyskaaga ama aad tahay daryeele, way fiican tahay inaad ogaato dhammaan iktiyaaradaada.
Sida Qorshayaasha Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare u shaqeeyaan Context link
Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (SNPs) waa noocyo gaar ah oo ka mid ah Qorshaha Medicare Advantage. Qorshooyinka Medicare Advantage oo dhan waa inay daboolaan isla adeegyada Medicare. Balse qaar ka mid ah Medicare SNPs waxaa loogu talagalay dadka qaba cudurrada ama caqabadaha gaarka ah. Qorshayaashaan waxaa laga yaabaa in lagu beego macaashka, dhakhaatiirta iyo doorashooyinka daawada si ay ugu habboonaadaan baahiyaha kooxaha ay u adeegaan.
Haddii aad u-qalanto labada caymis, waxay u badan tahay in inta badan kharashaadka lagaa dabooli doono Context link
Noocyada 4 Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare Context link
Qorsheyaasha Caafimaadka ee Laba Geesoodka ah (D-SNPs) waxaa loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. (Dadkaan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa “dadka u-qalma labada caymis.”)
Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (C-SNPs) waxaa loogu talagalay dadka qaba dhibaato caafimaad oo daran ama naafonimo keeni karta. Qorshayaasha qaarkood waxaa loogu talagalay oo keliya dadka qaba xaalad gaar ah, sida wadne-qabadka daba-dheeraada, sonkorowga ama cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (I-SNPs) ee Hay'adeed waxaa loogu talagalay dadka ku nool gudaha xarunta daryeelka sida hoyga kalkaalinta, ama daryeelka kalkaalinta ee guriga.
Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (I-SNPs) ee Hay'adeed waxaa loogu talagalay dadka ku nool xarun nolosha lagu caawiyo oo hela daryeel la mid ah midka xarunta kalkaalinta caafimaad ee xirfadlaha.
Waa maxay kharashka ku baxa ku biirida Qorshaha Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare Context link
Haddii aad haysato Medicaid iyo Medicare labaduba, waxay u badan tahay in kharashkaaga badankiisa la dabooli doono. Haddii aadan haysan Medicaid, kharashaadkaaga saxda ah waxay ku xirnaan karaan qorshaha aad doorato. Guud ahaan, waxaad bixin doontaa kharashaadka aasaasiga ah ee haysashada qorshaha Medicare Advantage.
Booqo UHCMedicareSolutions.com si aad wax badan uga ogaato qorshayaasha C-SNPs, I-SNPs, iyo IE-SNPs ee aan bixino.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.22.2022 waqtiga 11:18 SUBAXNIMO CDT